भाडा भाँडा लिजिंग | अर्थव्यवस्था वित्त
जोस रीसियो | | उद्यमीहरू, negocios
भाडा र लिज दुबै हुन् वित्तीय संचालन धेरै विशिष्ट कि केहि बिंदु मा वा अन्य तपाईं आफ्नो वास्तविक आवश्यकताको आधारमा मुद्दा हाल्न सक्नुहुन्छ। ठिकसँग तिनीहरू मूल रूपमा दुई फाइनान्सिंग विकल्पहरू हुन् भनेर चिनिन्छन् जुन एक अर्कासँग एकदम मिल्दोजुल्दो छ, तर त्यसमा केही भिन्नताहरू छन् जुन तपाईंले अबदेखि ध्यानमा राख्नुपर्नेछ। जे भए पनि, ती सामग्रीको राम्रो दीर्घकालिक भाडामा आधारित छन्। उदाहरण को लागी, एक वाहन, एक सम्पत्ति, कम्पनी को लागी सामग्री वा टेक्नोलोजिकल उपकरण।
जे भए पनि यो कारको खरीदमा हो जहाँ यी प्राय: प्रयोग गरिन्छ। वित्तीय संचालन। जहाँ भाँडामा लिने सम्झौता हो, घर मालिक दायाँ तिर टेडस् एक निर्दिष्ट अवधिको लागि भाडा आयको भुक्तानीको लागि विनिमयमा पट्टेदारलाई सम्पत्ति प्रयोग गर्न। जबकि भाडामा परिभाषा, यसको विपरित, एक हो कि एक सम्झौताको माध्यम द्वारा पूंजी वस्तुहरु पट्टेको प्रणाली को संदर्भित गर्दछ कि पट्टेदार द्वारा खरीद को विकल्प प्रदान गर्दछ। तपाईंले देख्नु भएको छ, तिनीहरू आफ्नो धारणामा समान छन्।
पहिलो नजर मा, तपाईं यी दुई सर्तहरू बीच फेला पार्न सक्नुहुनेछ पहिलो भिन्नता भनेको यो करारको वस्तु सन्दर्भ गर्दछ। र धेरै खास गरी हिसाब गर्न जब देखि भाडामा लिन सकिन्छ केवल एक खर्च को रूपमा विचार गर्नुहोस्, भाडामा ण को राशि को लागी देयता खाताहरु लाई असर गर्दछ। यो एक भिन्नता हो जुन एक वा अर्को मोडेल रोज्न धेरै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। र त्यो अपरेसन को उद्देश्य मा निर्भर गर्दछ तपाईं पूरा गर्न लाग्नुभएको छ। राम्रो वा नराम्रो एक वा अर्को बिना, यो तपाइँको वास्तविक वित्तिय आवश्यकताहरूमा निर्भर गर्दछ।
1 सम्झौताको अन्तमा
2 सम्झौताहरू कति लामो हुन्छ?
3 तपाईं के सेवाहरू प्रस्ताव गर्नुहुन्छ?
4 भाडामा दिएका लाभहरू
5 वाहन बीमा कभर गर्छ?
6 भाडामा लिने बेफाइदाहरू
दुबै वित्तिय मोडेलहरू छुट्याउन सब भन्दा निर्णायक क्षणहरूमध्ये एक हो जब सम्झौता समाप्त हुन्छ। किनभने त्यसो भए यसको वास्तविक अर्थ फरक हुनेछ। तर के तपाई साँच्चिकै जान्नुहुन्छ? जहाँसम्म लीजको सवाल छ, यो यस्तो हुनेछ जब तपाईं राम्रो माल प्राप्त गरेको माल फर्काउनुहुन्छ, जस्तै कार, जुन सबैभन्दा धेरै जसो बारम्बार भएको हुन्छ। पनि जब अनुबन्ध विस्तार हुन्छ वा केवल सही पल मा तपाईं मा माथि उल्लेखित राम्रो को खरीद अपरेशन पूरा।
यसको विपरित, भाँडामा तपाईंसँग दुई धेरै राम्रा परिभाषित विकल्पहरू छन्। एकातिर, राम्रो प्राप्त गरेको फिर्ता गर्दा वा विपरितमा जब सम्झौताको अवधि बढाइन्छ। तपाईंले देख्नु भएको छ, केहि सानो भिन्नताहरू छन् जुन तपाईंलाई असर गर्न सक्छ एक वा अन्य वित्त मोडेल छनौट गर्नुहोस्। जे होस् तपाईले निर्णय लिनु भएको छ धेरै व्यक्तिगत र आर्थिक चरमा निर्भर गर्दछ। अर्कोतर्फ, तपाईं यो भुल्न सक्नुहुन्न कि भाडामा लिने सन्दर्भमा अन्य परिस्थितिहरूको तुलनामा केहि अनुकूल हुन सक्दछ।
सम्झौताहरू कति लामो हुन्छ?
अर्को सान्दर्भिक पक्ष भनेको त्यो हो जुन यसको समयावधिसँग सम्बन्धित छ। किनभने प्रभावमा, यो कारक पनि तपाईंलाई एक वा अर्को छनौट गर्नको लागि निर्णायक हुनेछ। तपाईको कम्पनीमा समाधान वा व्यापार को रेखा। यस हिसाबले, भाडामा लिने सम्झौता धेरै बढी सौन्दर्यात्मक छ किनकि यसलाई दुई वर्षको न्यूनतम अवधि आवश्यक छ। त्यसकारण यसले सञ्चालनका लागि अझ बढी कठोरता प्रदान गर्दछ, यद्यपि यसको बदलामा यसले दुबै पक्षहरू मध्ये कुनै एकबाट पनि वार्ता गर्न सकिन्छ भनेर प्रदान गर्दछ।
भाँडामा लिनु, यसको अंशको लागि यसको विशेषताहरू छ गतिशीलता र लचकता ताकि तपाईं अब देखि जान सक्नुहुन्छ हरेक नगद स्थितिसँग अनुकूलन गर्न सक्नुहुनेछ। अचम्म मान्नु पर्दैन, यो एक वित्त पोषण हो जुन विशेष गरी छोटो अवधिको लागि लक्षित हो। जहाँ कुनै पिरियडहरू हुँदैन, त्यहाँ अवधिको कुनै न्यूनतम अवधि हुँदैन, अघिल्लो अर्थ खुलाइएको वित्त पोषणको मामलामा। यस परिदृश्यबाट, यो भन्न सकिन्छ कि तिनीहरू वित्तिकरणको बिरूद्धमा छन् जुन उद्यमीहरू र साना र मध्यम आकारका उद्यमीहरूको माग पूरा गर्न लक्षित छन्। अन्य प्राविधिक विचारहरूको पछाडि अर्कोतर्फ यस लेखमा विश्लेषण गर्नुपर्नेछ।
अर्कोतर्फ, यो सेवालाई पनि ध्यानमा राख्नु महत्त्वपूर्ण छ कि यी विशेष linesण ले तपाईंलाई प्रस्ताव गर्न लागिरहेको छ। किनभने ती उस्तै हुँदैनन् यी प्रत्येक मोडेलको लागि। किनभने वास्तवमा, भाँडामा लिने काम भौतिक वस्तुहरूको भाडाको लागि हो। र त्यसकारण यो केवल कारको खरीदमा मात्र सीमित छैन, किनभने प्रयोगकर्ताहरूको धेरै राम्रो हिस्साले विश्वास गर्न सक्दछ। यदि होईन भने यसको विपरितमा, यो एक अपरेशन हो जुन अरू लेनदेनको लागि बढी खुला छ। उदाहरण को लागी, एक कम्प्युटर, टेलिभिजन, संगीत उपकरण वा अब तपाईं संग हुन सक्छ कि कुनै अन्य आवश्यकता को अधिग्रहण को लागी बनाईएको।
यो सवारी खरीदको विशिष्ट मामलामा कम महत्त्वपूर्ण हुँदैन किनकि यसले सेवा र सुविधाहरूको विस्तृत दायरा बोक्छ र हामीले चलाइरहेका अन्य अपरेसनले भनेको भनेको लीज हो, जसबाट ग्रसित हुन्छ। व्यर्थमा होइन, यदि तपाईं ती मध्ये पहिलो रोज्नुभयो भने तपाईंसँग एक हुनेछ व्यापक बीमा, सडक छेउमा सहयोग वा प्रतिस्थापन वाहन, केहि सब भन्दा सान्दर्भिक। केहि चीज जुन तपाइँलाई हुने छैन यदि तपाइँको निर्णय अन्ततः पट्टि लिने विकल्प छ। अन्य कारणहरूको बीचमा किनकि सबै मर्मतहरू तपाईको आफ्नै कार्यमा गर्नुपर्नेछ। के अन्त मा लागतहरु तपाईं शुरू बाट सोच्न सक्छ भन्दा धेरै अधिक हुनेछ। तिनीहरू सानो विवरण हुन् जुन तपाईंले ध्यान दिनुपर्दछ ताकि सम्झौतामा हस्ताक्षरको साथमा कुनै अन्य आश्चर्यहरू नहोस्।
भाडामा दिएका लाभहरू
अर्कोतिर भाडामा दिँदै, तपाईंलाई प्रदान गर्दछ धेरै फाइदाहरू, जस्तै हाम्रो indeणीको स्तर नबनाई सम्पत्तिहरू हुने सम्भावना वा कम्पनीहरू र स्वरोजगारको लागि कर घटाउन योग्य व्यय हुने भए पनि व्यक्तिको लागि होईन। एक मोटर गाडी को खरीद को सम्बन्ध मा, तथ्य छ कि तपाईं कागजको बारे मा चिन्ता छैन, करहरु तिर्न र अन्य महत्वपूर्ण कारणहरु पनि प्रशंसनीय छ। अचम्म मान्नुपर्दैन, यो भाँडामा लिने कम्पनी नै हो जसले यी प्रशासकीय प्रक्रियाहरूको देखभाल गर्दछ। त्यस बिन्दुमा तपाईं यस वित्तिय अपरेसनमा हस्ताक्षर गर्न बढी झुकाव हुन सक्नुहुन्छ।
यस परिदृश्यमा, तपाईले अन्य पक्षहरू पनि मूल्या should्कन गर्नु पर्छ जस्तै राम्रो तपाईं वित्त गर्न चाहानुहुन्छ अब देखी। किनभने कुनमा निर्भर गर्दछ तपाईले एक वा अन्य सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्नु पर्ने हुन्छ र त्यसले आन्दोलनको विशेषताहरु लाई बिभिन्न भिन्नतामा पुर्‍याउँछ। यद्यपि यो सत्य हो कि तपाईसँग यी दुई कार्यहरूको संरचना परिभाषित गर्न बाहेक अरू कुनै विकल्प छैन। तिनीहरू पुग्न सक्ने रकम भन्दा पछाडि यो अर्को पक्ष हो जुन अपरेसनलाई असर गर्दैन।
वाहन बीमा कभर गर्छ?
हुनसक्छ तपाईं यस वित्तिय अपरेशनको यस प्रभावमा रोक्नुभएको छैन, तर कुनै श doubt्का बिना तपाईंले अब देखि यो दिमागमा राख्नु पर्छ। किनकि भाँडा भाडामा लिने बिमा कुनै पनि वर्गको गाडीहरूको लागि हो जसलाईaआवश्यक पर्दछ दायित्व बीमा अनिवार्य, त्यो हो केवल कार, भ्यान, ट्रक, मोटरसाइकल, आदि। यदि होईन भने यसको विपरित, तिनीहरूले औद्योगिक र पेशेवर मेसिनरी सवारी साधनहरूलाई पनि असर गर्छन्। यस अर्थमा, तपाईं यो भुल्न सक्नुहुन्न कि प्रत्येक भाडा कम्पनीले उनीहरूको आफ्नै सुविधाहरू र कभरेजको साथ विभिन्न सम्झौता प्रस्ताव गर्दछ। के तपाई जान्न चाहानु हुन्छ कि केहि धेरै सामान्य हो? ठीक छ, ध्यान दिनुहोस् किनकि तपाईं अबदेखि श doubt्काबाट मुक्त हुन सक्नुहुन्छ।
बीमा करारमा विभिन्न रूपहरू सम्भव (सबै जोखिम, तेस्रो पक्षहरू विरूद्ध, चोरी वा आगो, सम्झौता नीतिहरूको अर्को दायरा बीच)।
सडक सहायता राष्ट्रिय वा अन्तर्राष्ट्रिय, जे होस् प्राय जसो अवस्थामा तपाईले आफ्नो कारमा न्यूनतम माइलेज प्रदान गर्नु पर्छ।
कुनै पनि केसमा, यो एकदम महत्त्वपूर्ण हुनेछ कि तपाईंले उनीहरूले प्रस्ताव राख्नुहुने तुलना गर्नुहोस् किनकि तिनीहरू बीच धेरै भिन्नताहरू छन्। यस तरीकाले, र यसको व्यवस्थापनको नतीजाको रूपमा तपाईले विश्वास गरे भन्दा बढी यूरो बचत गर्न सक्नुहुनेछ। यो एक धेरै लचिलो उत्पादन हो। त्यस्तो हदसम्म कि तपाईं यसलाई आफ्नो आफ्नै आवश्यकताहरूमा ढाँचाउन सक्नुहुन्छ प्रयोगकर्ताको रूपमा कि तपाईं यो विशेष वर्ग वित्तीय उत्पादनको वर्गमा हुनुहुन्छ। यद्यपि यो विशेष प्रासंगिकताको हुनेछ कि तपाईंले उनीहरूलाई साना विस्तारमा विश्लेषण गर्नुहोला ताकि तपाईं थोरै सम्भावित गल्तीहरू गर्नुहोस्।
भाडामा लिने बेफाइदाहरू
अर्कोतर्फ, यो वित्त पोषण अपरेसनले तपाईंको व्यक्तिगत रुचिलाई केहि वा अन्य क्षतिहरू प्रस्तुत गर्दछ र जसमध्ये निम्न खण्डहरू बाहिर उभिन्छन्।
यदि अन्त मा तपाईं एक उत्पन्न प्रारम्भिक टर्मिनेसन एक सिर्जना गर्न सक्दछ धेरै उच्च क्षतिपूर्ति। यस बिन्दुमा यसले तपाइँलाई धेरै पैसा खर्च गर्न सक्दछ र कुनै पनि केसमा तपाइँले सुरूबाट अपेक्षा गरेको भन्दा बढि। यस अर्थमा, तपाईंसँग प्रत्येक क्षण र परिस्थितिमा आफ्ना वास्तविक आवश्यकताहरू परिभाषित गर्न बाहेक अरू कुनै विकल्प हुनेछैन।
अवश्य पनि यो विकल्प छैन उपलब्ध कम्पनीलाई आवश्यक हुन सक्ने सबै चीजहरूको लागि।
तपाइँलाई यो थाहा नहुन सक्छ, तर यस अपरेशनलाईaको आवाश्यक हुन्छ बन्धनमा जम्मा गर्नुहोस्। तपाईको राजधानीमा यो आन्दोलन तपाईको जीवनको कुनै कुनै समयमा सब भन्दा उपयुक्त नहुन सक्छ।
र अन्तमा, सम्भावित धाराको समावेश जरिवाना सम्पत्ती को अत्यधिक प्रयोगको कारण, र यसले तपाईंलाई अपेक्षित भन्दा बढी खर्च गर्न सक्दछ।
लेखको पूर्ण मार्ग: अर्थव्यवस्था वित्त » negocios » उद्यमीहरू » भाँडामा बनाउने भाडामा लिदै
पेन्सन गणना कसरी गर्ने?